Ukubukezwa kwe-Semalt: Ukudweba izithombe ezivela kumawebhusayithi
Namuhla iwebhu inkulu kakhulu, futhi ifinyelela kakhulu kunoma ubani . Abantu bangakopisha futhi baphinde baphinde bakhicilele noma iyiphi isithombe abasithandayo kalula. Kodwa ngaphambi kokwenza kanjalo, badinga ukucabanga ngobunikazi be-copyright.
Abantu abaningi bathanda ukuthola izithombe ezinhle ku-intanethi. Kulula, futhi bangathola noma yini abayifunayo ngokusondela kwi-intanethi kuphela. Enye yezindlela ezivame ukukhipha izithombe ezivela kumawebhusayithi ahlukahlukene. Kodwa ngaphambi kokukopisha isithombe, badinga ukucabanga ngokusemthethweni kwesenzo. Isibonelo, kudinga ukucatshangelwa ukuthi othile angase abe ngumnikazi lezi zithombe futhi adinga ukucela imvume.
Ukukhishwa kwesithombe: I-'Thuluzi 'elidumile labavuni
Ukuhlunga isithombe kuyinkqubo yokulanda inani elikhulu lemifanekiso esuka kumthombo othile kuwebhu. Ithuluzi elisebenzayo labantu abazama ukuthola izithombe ezifanele ukuhambisana nezihloko zabo noma amafemu abo. Kodwa zonke lezi zithombe zivelaphi? Kunamapulatifomu amaningi e-intanethi, enikeza izivakashi nge-database yesithombe ekhona. Kodwa uma bengayitholi isithombe esifanele kakhulu, ngokuvamile basebenzisa i-Google ukuthola izithombe ezithandekayo kubo. Ngenxa yalokho, ukuhlunga isithombe kubonakala sengathi kuyisixazululo kuphela kubo.
Ingabe i-Image Scraping Legal?
Namuhla amabhizinisi amaningi, kanye nabantu ngabanye, bathola zonke izithombe abazidingayo emsebenzini wabo kanye nokuthunyelwe kwi-Inthanethi. Kodwa abantu kudingeka baqaphele ukuthi ukudweba izithombe ngobuningi kungase kungabi ngokomthetho. Into ebaluleke kunazo zonke kubantu abaqothula izithombe kufanele baqaphele ngesilinganiso sezithombe abazitholayo. Kubalulekile ukuthola isithombe esifanele, ukuyithumela kuma-platforms ahlukahlukene e-media, njenge-Facebook noma i-Twitter. Abantu abaningi bafuna ukuthatha umfundi
Ukusetshenziswa Okufanele Kwezithombe
Uma ufisa ukuthi ungasebenzisa njalo izithombe ozithathile zona. Kungenjalo, udinga ukuthola isithombe ku-intanethi. Kunemithombo eminingi ye-intanethi lapho abantu bangakwazi ukusika izithombe. Ngisho noma abantu bakhululekile ukusika isithombe esithandayo, kwezinye izimo kudingeka bacele imvume. Uma umnikazi engavumelani, kungcono ukuzama ukuthola ezinye izithombe ezifanayo kusuka kwezinye izinsiza .Abanini bamawebhusayithi amaningi bazimisele banikele izithombe zabo mahhala. Ukugwema noma yimiphi imiphumela yomthetho, abantu kufanele bacabangele ezinye izinto. Isibonelo, akufanele bakopishe izithombe zabantu abadumile abahlanganyela emisebenzini yangasese.
Abaningi bezithombe nezithombe abaqopha izithombe zabo ku-intanethi ukuzithengisa. Abantu bangalingeka ukuba bakopishe isithombe bese besishintsha, kodwa lesi akusona isisombululo somthetho. Kudingeka bakhumbule ukuthi umthetho we-copyright unikeza wonke amalungelo ezithombe kumnikazi we-copyright. Lokhu kusho ukuthi umninimuntu oyedwa okhetha ukuthi umsebenzi wakhe uzoshicilelwa nokuthi ubani ozosebenzisa izithombe zakhe.
Ngisho noma ukudweba izithombe ezivela kumawebhusayithi kungaba yinto elula yabavuni, kudingeka baqaphele. Isibonelo, akufanele bakopishe izithombe zabanye abantu futhi bahloniphe umthetho we-copyright. Uma benza kanjalo, ukuhlunga isithombe kungaba yithuluzi elikhulu futhi eliyigugu kubo kanye nebhizinisi labo Source .